Digital Forensics part 45 Event log Forensics
Event Log ဟာအရေးကြီးသလာဆိုရင် အမှုမထားရင် အရေးမကြီးဘူး အမှုထားရင်တော့ အသုံးလဲဝင်သလို အရေးလဲကြီးပါတယ်။ MS Operation System တစ်ခုလုံးရဲ့ security ကစလို့ software hardware ရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနေတဲ့ Log တွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။Forensics သာမက ရိုးရိုး window user တွေရော MS Server သမားတွေအတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အသုံးချနိုင်ရင် incident Response အတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Event Log ကြည့်ပြီးဘာတွေသိနိုင်လဲ
ဘယ် User က ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်လဲ Remote system တွေကဘာတွေဖြစ်လဲ ဘာတွေကို Access လုပ်သွားလဲ အစရှိသည်ဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ WS OS အလိုက် MS အလိုက် Version မြင့်လာတာနဲ့အမျှ Event Log file type တွေ file name တွေပြောင်းလာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆို အရင် MS version တွေမှာ file size ကြီးတဲ့အတွက် OS ကို နှေးစေတဲ့အတွက်ပါ။MS OS vista နဲ့ MS Server 2008 မှာစတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။
Performance မြန်လာရုံတင်မက log တွေလဲ များစွာပါဝင်လာပါတယ်။
MS Server တွေဆိုလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
ပါဝင်တဲ့ Log တွေကတော့သူ့အခွဲတွေ အခွဲတွေအလိုက် အများကြီးပါပဲ။
forensics view အရင်ဆိုရင်တော့ case အလိုက်အပြင်ရနိုင်သမျှ Log ​တွေရနိုင်​တာ အ​ကောင်းဆုံးပါ.
Case ကရှင်းရင်တော့ log တစ်ခုပဲကြည့်ရုံပါပဲ။
MS server မှာဆို subcategory အလိုက်အပိုင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာက အပိုင်းလိုက် အပိုင်းလိုက် (subcategory)ထဲကို ဘာအကြောင်းကြောင့် ဘာဖြစ်လို့ Log တွေဝင်လာတာလဲဆိုတာပါ။
How To Forensics ?
online or offline investigation
MS window ,Server မှာပါတဲ့ Event Viewer ပါ
အရှင်းဆုံး fail audit / login attempt fail ကိုပြထားပါတယ်
Open Source Intelligence (OSINT) ဆိုသည်မှာ
Open Source Intelligence (OSINT) ဆိုသညျမှာ
Digital Forensics Part (48) SCADA(Supervisory Con...
Window registery Keys
Digital Forensics Part 47 ( OPEN SOURCE INTELLIGEN...
Digital Forensics Part 46 Event Log Forensics
Electronic နဲ့ Forensics (Part 39)
What Is Digital Forensics ? Part (44) Wireless Rou...